views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-24 မူလ:ဆိုက်ကို
သာမန်ကျောက်တုံး, polishing အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောခြင်း, ကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများ Polishing Wheel, ကြိတ်စက်, သဲအထည်, သဲ, ရေစက္ကူ, ရေစက္ကူ, ရေ Sand Papide, Chromium အောက်ဆိုဒ်,အသေးစားလျှပ်စစ်ကိရိယာများကဲ့သို့Power Hand Sander, ခရီးဆောင်ကြိတ်စက်နောက် ... ပြီးတော့။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနုပညာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အညီဆောင်ရွက်သည်။ တချို့က full-body polishing ဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း polishing ဖြစ်ကြသည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာကျောက်ကိုဘယ်လိုအရောင်တင်ရမလဲဆိုတာပြောမယ်။
များသောအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောကျောက်တုံးများကို polishing များအတွက်ဘုံနည်းလမ်းသုံးခုရှိသည်။
1 နှင့်အတူ polishingစွယ်စုံပါဝါကြိတ်စက်။
2. Polish Polishing Machine ကိုအရောင်တင်ပါလက်ျာ bits နှင့်အတူကြိတ်စက်။
3. တုန်ခါမှု polishing စက်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက် polishing အတွက်သင့်လျော်သည်။
အမှန်မှာမည်သည့်ကျောက်ကိုမဆိုတောက်ပနိုင်သည်။ ကျောက်စရစ်ခဲများကိုရေဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပွတ်သပ်ပေးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အကယ်. သင်ကပွတ်ပြားတစ်ခုနှင့်တူလိုပါကဤနေရာတွင်သင်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းခြင်း, အကယ်. သင်သည်ကျောက်စရစ်ခဲများကိုစက်ဖြင့်ရေးဆွဲလိုပါက roller polishing ကိုသုံးနိုင်သည်polished bit နှင့်အတူလက်ကိုင်ကြိတ်စက်။ကျောက်တုံးတွင်ကျောက်တုံးပေါ်တွင်အပေါက်များရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ၎င်းသည်ရေကဲ့သို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင့်မားသောမြင့်မားသောခဲယဉ်းခြင်းနှင့်အရောင်တောက်တောက်ကော်များဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဖယောင်းခြင်းနှင့်ပန်းချီကားများအနေဖြင့်ကျောက်စရစ်ခဲများကိုကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, စက်ရုံမှာလုပ်သားတွေကိုများသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိတယ်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကိုကဲ့သို့Power Sander စက်, Power ကြိတ်စက်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်များလုပ်ဖို့ကူညီဖို့စသည်တို့ကို။ နှင့် fixed ထုတ်ကုန်အလွယ်တကူရေရှည်စည်းဝေးပွဲလိုင်းမှတဆင့်အလွယ်တကူပွတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောက်တုံးငယ်များကိုဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ယူပါ, ကျွမ်းကျင်သောလက်သမားတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင်တစ်ဆယ့်နှစ်ဆထက်မကလုပ်ဆောင်နိုင်သည်စွယ်စုံပါပါဝါကိရိယာ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကြမ်းတမ်းသောကျောက်ကုန်သည်သည်ကျောက်တုံးများကိုအထူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ပိုလန်အားထိုးနှက်ရန်ကြမ်းတမ်းသောကျောက်တုံးများကို0ယ်ယူလိမ့်မည်။ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက်ကျောက်တုံးသည်လှပသောမျက်နှာနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကျောက်အသားအရေရှိသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်အလုပ်သမားများသည်ကျောက်တုံးများကိုလှောင်အိမ်ထဲကို 15 မိနစ်မှ 30 မိနစ်အထိရေနွေးငွေ့ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကျောက်များကိုအပူပေးသည်။ ပြီးတော့ကျောက်တုံးတွေကိုရေနွေးငွေ့နေတုန်းပဲ paraffin ဖယောင်းကိုအိုးတစ်လုံးထဲထည့်လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ သင့်မှာတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်ဖယောင်းတိုင်အနည်းငယ်ဝယ်ပြီးပန်းကန်လုံးထဲထည့်ပါ။ ထို့နောက်ပန်းကန်လုံးကိုလှောင်အိမ်ထဲထည့်ပါ။ ဖယောင်းသည်ရေထဲသို့လှည့်သောအခါကျောက်ကိုယူပြီးအနည်းဆုံးအဆက်အသွယ်မျက်နှာပြင်ဖြင့်နေရာချပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သံဝါယာကြိုးဖြင့်ဘောင်ကိုလုပ်ပါ။ ထို့နောက်သူတို့ကဖယောင်းရေနှင့်ပူပြင်းနေစဉ်သင်၏ကျောက်ကိုအညီအမျှအားဖြင့်သာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အသုံးပြုသောအသစ်ဝယ်သည့် brush ကိုသုံးပါ။ သင်၏ကျောက်သည်ကျောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သာမန်လူတွေကကျောက်ကိုအရောင်တင်ဖို့ရိုးရှင်းပါတယ်။
အသေးစားလျှပ်စစ်ကိရိယာများ Power Hand Sander ခရီးဆောင်ကြိတ်စက် စွယ်စုံပါဝါကြိတ်စက် ညာဘက် bits နှင့်အတူကြိတ်စက် polishing bit နှင့်အတူလက်ကိုင် grinder ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကို Power Sander စက် ပါဝါကြိတ်စက် စွယ်စုံပါပါဝါကိရိယာကိရိယာ